Fonjan’I Mahajanga: “…mavesatra ny asan’ny mpandraharaha ny fonja” | Région Boeny
Ny olona voafonja manana talenta amin’ny famokarana arak’asa hiomanany amin’ny fiverenana eny amin’ny fiaraha-monina. Izay no lohahevitry ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Zon’olombelona teto Mahajanga, tao amin’ny Fonjaben’I Marofoto ny 10 desambra 2016.
Voafonja miisa 895 no tazonina ao. Avy amin’ny distrikan’i Tsaratanàna, Ambatoboeny, Maevatanana, Soalala, Mahajanga I sy II izy ireo ka ny 341 tsy mbola voatsara, 442 efa voatsara, 18 nangataka fahafahana vonjimaika, 01 nampiakatra ny didy amin’ny fitsarana ambony.
Miofana arak’asa sy manabe azy ireo ny mpandraharahan’ny fonja sy ireo mpiara miombon’antoka eto Mahajanga ary ny fikambanan’ny mpianatra mpitsabo mpanampy avy any Frantsa mba hiatrehan’izy ireo fianam-baovao rehefa mivoaka ny fonja.
Ny tanjona dia mba ho mpananatra ny mbola tsy voafonja ianareo, ary handalovana ihany fa tsy hiverimberenana sanatria ny fonja hoy ny Prefet an’I Mahajanga tamin’ireo voafonja nandritra ny fizarana ny mari-pankasitrahana tamin’ny fiofanana arak’asa nataon’izy ireo.
Varotra sy fampiratiana ny asa-tànana’izy ireo, fampisehoana dihy zumba maromaro nataon’ireo tanora voafonja no nanamarihana io andro io teto Mahajanga tao anatin’ny Fonjaben’I Marofoto.
Nomarihin’ny Lehiben’ny fonja fa mavesatra ny asan’ny mpandraharaha ao nohon’ny fiovaovan’ny isan’ireo voafonja sy ny tsy fitovian’ny fari-piainany sy ny fihaviany. Mba hanamora kokoa ny fitantanana ny fonja hoy izy, dia misy amin’izy ireo izay tsara fitondran-tena, omena fahafahana manatanteraka asa amina sampandraharaham-panjakana.
Anisan’ny mikajy ny fahadiovana ny Fonjaben’I Marofoto, ka isan-taona dia tsy maintsy mandoko ny atiny sy ivelan’ny fonja ireo tompon’andraikitra. Nohavaoziny tamin’ity taona 2016 ity ihany koa ny fonjan’ny zaza tsy ampy taona ao.
Tsy misy andro hanadinoan’ny Faritra ny mamangy ireo voafonja manerana an’i Boeny sy mitondra fanampiana mba hifalian’izy ireo amin’ny fetin’ny faran’ny taona hoy ny fankaherezana avy amin’ny solotenan’ny Lehiben’ny faritra, Atoa Bazezy Clavelah, talen’ny fandraharahana ankapobeny sy ny fitantanana ny lafintanin’ny Faritra.